8 Mafirimu Pamusoro peVanyori VeZvese Nguva Uye Mitambo | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Biography, Vanyori, Fantasy, Vechidiki Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Nhetembo
Mukumuka kwekutanga kwemwedzi wapfuura we Tolkien, nezve munyori we Ishe wemhete, nhasi ndinosarudza imwe 8 mafirimu nezvevanyori. Zviripachena kune mamwe akawanda, asi mushure mekuongororwa ini ndafunga pane izvi. Chokwadi munhu wese ane chake, hongu, kana zvimwe zvinonyanya kusarudzwa. Parizvino mazita aya ari pamusoro dickens, Lorca, Austen, hanzvadzi Charlotte, HC Andersen, Agathe Christie y Shakespeare.
2 Mukadzi asingaonekwe - Mukadzi asingaonekwe
3 Iyo yakanaka Andersen
4 Shakespeare murudo
5 Lorca, kufa kwanyanduri
6 Wechidiki Jane Austen
7 Vakoma vaBrontë
Nyeredzi Nicholas Hoult, inozivikanwa nekuve iye Chikara mumafirimu azvino nezve chizvarwa chekutanga che X-varume. Uye uverenge simba iro iro Ndakapfuura neHondo Yenyika Yekutanga yemunyori neshamwari dzake dzekoreji. Icho chokwadi uye hukama navo zvakaratidza iyo kusikwa kweiyo Kubatana kweRin'i uye iyo nyika nemitauro zvakatungamira mukubudirira kwepasi rose kweiyo yaive iyo pamwe inonyanya kufarirwa bhuku rekufungidzira trilogy of Nhoroondo.
Mukadzi asingaonekwe - Mukadzi asingaonekwe
Kune mamwe mafirimu pamusoro paCharles Dickens, ichangobva kuitika yaive ndizvo. Uye ngatiregei kutaura nezvake enganonyorwa, ayo anopa zvimwe zvakawanda zvinyorwa. Asi kune zvimwe prosaic zvikonzero, verenga kuzvipira kwangu kuna Ralph Fiennes, nhasi ndinogara neuyu akatungamira uye akatarisa mukati 2013.
Izvo zvinoenderana ne Claire Tomalin inoverengeka, Munyori weChirungu uye mutori wenhau anozivikanwa nehupenyu hwake hwevanyori vakadai saambotaurwa Dickens, Thomas Hardy kana Jane Austen. Anotaurira kuti, pakukwirira kwebasa rake, Dickens, akaroora uye ane makore makumi mana nemana, sangana nemukadzi wechidiki ane gumi nemasere inova yako anoda muchivande kusvikira afa.
Iyo yakanaka Andersen
Zvimwe ndezve kwaari ndangariro dzehudiki Ini ndinofanirwa kune yehunhu hwayo kana kukosha kwayo. Asi izvi 1952 mimhanzi vhezheni nezve hupenyu hwe anonyanya kufarirwa Danish munyori wenyaya dzevana Icho chimwe chezvandinofarira. Kune dzimwe shanduro dzapashure, asi iyi yakagara mumoyo mangu zvakare nekuda kwemutsa, unoseka uye technicolor mufananidzo waakaita Danny kaye.
Yakakurumbira, anokunda maOscar akati wandei, pakati pavo yakanakisa firimu, neimwe Fiennes pakati ... Hazvina basa kana ichiwedzera kana kushomeka ichokwadi, nguva dzose iine akawanda maokoni uye crannies uye zvakavanzika zveakakurumbira echirungu bard enguva dzese. Uye hazvina basa kuti zvinotungamira mukuseka kwekusanzwisisana nemunyori wayo. Ndizvo 1998 vhezheni akatogara pamusoro yezvizhinji zvakaitwa pamusoro pake.
Lorca, kufa kwanyanduri
Simudza ruoko rwako uyo asingarangariri izvi yakanakisa terevhizheni nezve Federico García Lorca. Uye kune zvakawanda. Akamutungamira Juan Antonio Bardem uye yakatanga kuratidzwa pakupera kwa 1987. Yakabatanidzwa ye Zvikamu gumi uye inogona kuonekwa zvakare pese paunoda paRTVE's A la Carta. Izvo zvakaunza pamwechete yakanakisa yedudziro yeSpanish, kunyangwe yaive nyeredzi mairi Nickolas nyasha, mutambi mukuru weChirungu uyo ​​akange aonekwa mune imwe yeaya akanakisa maBritish akateedzana ema80, Dzokera kuBrideshead.
Wechidiki Jane Austen
De 2007. Inotungamirwa na Julian Jarrold uye nyeredzi Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters kana James Cromwell pakati pevamwe. Maererano ne uchapupu akadzidza pa rudo yemunyori akakurumbira weVictorian negweta diki Tom Lefroy, iyo firimu yakadzokorora iyi nyaya kuti inyatsoongorora hwaro hwerudo rwemabasa avo.
Iwo mavhero evanin'ina vaBrontë ane chiuru uye imwe vhezheni mumabhaisikopo, asi kwavari sevapikisi pane akawanda mashoma. Iyo yakazotevera iri kubva muna 2016, asi ini ndinonamira neiyi fungidziro yavakagadzira kubva France en 1979. Inotungamirwa na Andre Techine, ine nyeredzi Isabelle Huppert, Isabelle Adjani naMarie-France Pisier. Uye anoita ongororo yakadzikama kwazvo yehupenyu hweaya matatu masista akasarudzika ezvinyorwa zvepasirese.
Uye ini ndinopedzisa neimwe firimu ye 1979 uyo anosaina nekutarisa maviri anorema zvirema zvemu cinema se Dustin Hoffman naVanessa Redgrave. Wekupedzisira anotamba Agatha Christie naHoffman mutori wenhau wekuAmerica anomuferefeta kushamisa kusinganzwisisike in 1926.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » 8 Mafirimu Pamusoro peVanyori VeZvese Nguva Uye Mhando